Wakhtiga Arsenal La Iibsanayo, Cavani Oo Go'aan Buuxa Ka Gaartey Man – Axadle
Wakhtiga Arsenal La Iibsanayo, Cavani Oo Go’aan Buuxa Ka Gaartey Man
Leicester Metropolis iyo Everton ayaa kamid ah tiro kooxo ah oo isku diyaarinata inay dalab ka gudbiyaan 25 sano jirka weeraryahanka ah ee kooxda Brentford ee Ivan Toney. (Athletic, subscription required)
Guddoomiyaha Tottenham ee Daniel Levy ayaa tababaraha xiga ee kooxdiisa siin doona fursada ay Gareth Bale markale qaab amaah ah ugula soo saxeexan karaan xilli ciyaareedka 2021-2022. (Mail)
Borussia Dortmund ayaa qiimaha Jadon Sancho ay ku iibinayso 87 Milyan oo pound ka dhigay iyaga oo horein ka badan 100 Milyan oo pound ugu doonayay, 21 sano jirka ree England ayaa Liverpool iyo Man United lala xidhiidhiayaa. (ESPN)
Dhinaca kale madaxa fulinta Borussia Dortmund ee Hans-Joachim Watzke ayaa sheegay in weeraryahan Erling Haaland oo ay saxeexiisa doonayaan Manchester United, Liverpool, Manchester Metropolis, Chelsea, Barcelona iyo Actual Madrid aysan iibin doonin xagaaga. (Metro)
Wakiilka Robert Lewandowski ee Pini Zahavi ayaa ku cadaadinaya Bayern Munich inay heshiis cusub oo mushahar sarre leh ka saxeexdaan Robert Lewandowski ama ay ka iibiyaan koox awooda heshiiskaas, Premier League ayaa kamida meelaha uu u wareegi karo. (Bild – in German)
Arsenal ayaa xiisaynaysa inay lasoo saxeexato khadka dhexe ee kooxda Rangers iyo xulka Finland ee Glen Kamara, oo 25 sano jir ah. (Soccer Insider)
Qoyska Glazer Household ayaa lagu qancin karaa inay iska iibiyaan Man United balse waa kaliya haddii dalab 4 Bilyan oo pound ah bathroom soo gudbiyo. (Instances, subscription required)
Tottenham ayaa dalab ka gudbisay daafaca midig ee kooxda Norwich Metropolis ee Max Aarons. (Soccer Insider)
Boca Juniors ayaa ka tanaasushay saxeexa Edinson Cavani uu sii joogaya Manchester United iyaga oo bedelkiisa u doortay 26 sano jirka ree Colombia ee Roger Martinez. (TyC Sports activities, through ESPN – in Spanish)
Maurizio Sarri ayaa ah tababaraha ay kooxda AS Roma doonayso inay bedel uga dhigto macalinkeeda cadaadisku saaran yahay ee Paulo Fonseca walow markii ugu dambaysay ee ay Sari xidhiidh la sameeyeen ay ahayd bishii January. (Sky Italia – in Italian)
Lucas Vazquez ayaa ku dhaw inuu heshiis cusub u saxeexo kooxdiisa Actual Madrid balse heshiis uu AC Milan ugu wareegayo ayaa wali dookh u ah xagaaga kaddib markii uu diiday inuu Atletico Madrid ku biiro. (AS)
Mulkiilaha shirkadda Spotify ee Daniel Ek ayaa la filayaa inuu toddobaadkan dalab 1.8 Bilyan pound ah ka gudbiyo Arsenal oo uu iibkeeda doonayso. (Sky Sports activities)
Lionel Messi ayaa madaxweynaha cusub ee Barcelona ee Joan Laporta u sheegay inuu diyaar u yahay inuu kooxda sii joogo isla markaana mushahar dhimis 50% ah sameeyo. (Esport3)
Barcelona attain settlement to signal Flamengo’s Gerson